2018 - Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle > All Articles > 2018
Price of Huawei Nova 3i will be 90,000 ks on 9th September0442
Shwe Lamineain September 10, 2018 3:28 am September 10, 2018
This is the Huawei Nova 3i. It’sanew Android phone that has the original price of 359,000 ks, now …
မိတ်ကပ် ကြာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ကြမယ်…။0544
အဝတ်အစားတွေ မတော်တော့တာ၊ အမေ့ခံရတာ၊ သေချာလိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ် တွေ ပျက်သွားတာစတဲ့ အရာတချို့က မိန်းကလေးတွေရဲ့ အိမ်မက်ဆိုးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ် လှလှပပလေး ထွက်လာဖို့ နာရီဝက်လောက် အချိန်ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်ထွက်တာနဲ့ နွေရာသီဆိုလည်း မိတ်ကပ် …
Beauty Tips for Rainy Season0731
Shwe Lamineain August 20, 2018 5:08 am August 23, 2018
Most of the girls are afraid of gaining weight, being forgotten and ruining the perfect makeup day. We know it …
Reasons Why You Should Fall Head Over Heels In love with Shop.com.mm’s App0677
Shwe Lamineain August 6, 2018 9:44 am August 8, 2018
Hi Guys, today, I would like to introduce how awesome shop.com.mm’s application is. You know it’s been raining on and …
Shop.com.mm’s Application ကိုအသုံးပြုသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၄) ချက်0369
Shop.com.mm app အကြောင်း ဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်။ ခုတလော မိုးကောင်းချက်က တချိန်ကုန် မိုးရွာလိုက်မိုးစဲလိုက်ဆိုတော့ ဖုန်းလေးသုံးလိုက်၊ laptop လေးသုံးလိုက်နဲ့ သာယာနေဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ မိုးအေးအေးထဲအပြင်မှာ shopping မထွက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Shop.com.mm application အကြောင်း …
Instagrammers တွေ အကြိုက် ကျောပိုးအိတ် လေးတွေ0904
Shwe Lamineain July 12, 2018 5:38 am February 21, 2020
Instagam အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ တခါတလေ ကျရင် Feed မှာပေါ်ပေါ်လာတက်တဲ့ ကျောပိုးအိတ် လှလှလေးတွေကို သတိထားမိကြမှာပေါ့နော်။ anello ကျောပိုးအိတ်တွက ခုလတ်တလောအရမ်း hit ဖြစ်နေတဲ့ ကျောပိုးအိတ် တွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းကရိုးရိုးလေးတွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့ …
These anello Backpacks Will Make Instagrammers Say, “Why don’t I own that already?”0386
Shwe Lamineain July 12, 2018 5:38 am July 12, 2018
If you scroll down Instagram feed, you’ll doubtlessly noticeabunch of backpacks that everyone takesaphotograph with it. …
How Much Discounts Will We Get on This Year’s Mobile Week?0525
Shwe Lamineain June 26, 2018 9:30 am June 26, 2018
Do you like Samsung? Are you interested in owning high end mobile? Well, guess what, Mobile Week is going to …
High End Device Samsung Note FE ကို 43% off နဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့ Mobile Week Discount တွေအကြောင်း0952
Shwe Lamineain June 26, 2018 9:30 am June 27, 2018
Samsung သုံးရတာကြိုက်တဲ့သူလား ဒါမှမဟုတ် မော်ဒယ်မြင့်ဖုန်းတွေကိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားလား။ ဒါဆိုရင်တော့ shop.com.mm က တစ်ပတ်ကြာပြုလုပ်မယ့် Mobile Week မှာလိုချင်တဲ့ဖုန်းတွေကို မတရားတန်တဲ့ ဈေးနဲ့ ဝယ်လို့ရနေပြီ ဆိုတာကိုသတင်းကောင်းပြောပါရစေ။ အံ့အားသင့်ရလောက်မယ့် discount parcentage တွေလဲပါတယ်နော်။Shop.com.mm …
မိုးတွင်းအခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ Monsoon Sale0572
Shwe Lamineain June 22, 2018 9:18 am June 22, 2018
နွေနေပူရဲ့ချွေးတွေကိုတိတ်ပေးလို့ မိုး စရွာတုန်းက မိုး ရွာတာကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ခဲ့ကြမယ်နော်။ မိုးစစရွာချင်း ကြည့်လေရာက စိမ်းလန်းပြီး စိတ်အေးချမ်းဖို့ကောင်းခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လည်းမိုးရာသီစရော မိုး ကအဲ့လောက်စိတ်ချမ်းသာစရာ မကောင်းးတော့ဘူး။ မြေသင်းနံ့ကဆွဲဆောင်ဖို့မကောင်းတော့သလို ကဗျာလည်းမဆန်တော့ဘူးနော်။ မိုး စက်တွေကိုချစ်ချင်ချစ်နို်င်ပေမယ့် မိုးရာသီကို မုန်းကောင်းမုန်းနိုင်ပါတယ်။ …